भूपूलाई विलासी सुविधा विधेयक पारित गर्न चलखेल, पूर्व सांसदलाई पनि पेन्सन ! - समाचार - कान्तिपुर समाचार
भूपूलाई विलासी सुविधा विधेयक पारित गर्न चलखेल, पूर्व सांसदलाई पनि पेन्सन !
पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सुविधा विधेयक
भाइटिकाकै दिन ५९१ सांसद भूपू हुने
भाद्र २८, २०७४ राजेन्द्र फुयाल
काठमाडौं — संविधानसभाबाट रुपान्तरित संसदको कार्यकाल सकिनै लाग्दा पूर्व पदाधिकारीलाई विलासी सुविधा दिने विधेयक पारित गराउने चलखेल सुरु भएको छ । महिनौंदेखि संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा अलपत्र रहेको पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयकमा पूर्व सांसदलाई पेन्सन सुविधा घुसाएर पारित गर्ने कसरत सुरु भएको हो ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको उम्मेद्वारी मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म मात्रै रुपान्तरित संसदको कार्यकाल रहने संवैधानिक व्यवस्था (संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था) का कारण संविधान निर्माता ५९१ सांसद कात्तिक ४ मा ‘भूतपूर्व’ हुँदैछन् ।
पूर्व राष्ट्रपतिलाई मासिक दुई लाख रुपैयाँ घरभाडा र मासिक ५० हजार रुपैयाँ वृत्ति, पूर्व उपराष्ट्रपतिलाई ७५ हजार रुपियाँ घरभाडा र मासिक ४० हजार रुपैयाँ वृत्ति, पूर्वप्रधानमन्त्री, प्रधानन्याधीश र सभामुखलाई मासिक ७५ हजार रुपैयाँ घरभाडा, सवारी साधन, इन्धन र सचिवालयका लागि कर्मचारी सुविधा प्रस्ताव गरिएको पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी व्यवस्थाजस्ताको तस्तै पारित भए भूपूका लागि मात्रै राज्यकोषमा करौडौंको व्यभार थपिन्छ ।
सुविधा विधेयक सदनबाट सोझै पारित गर्न खोजिएपछि आएको चौतर्फी दबाबका कारण २०७३ चैतमा विधेयकमाथिको दफावार छलफल र संशोधनमा सहमतिका लागि राज्यव्यवस्था समितिमा पठाइएको थियो । संसद सचिवालयका एक अधिकारीले भने विगतमा विधेयक रोकिनुको भित्री रहस्य अर्कै भएको दावी गरेका छन् । उनका अनुसार विधेयकमा प्रस्तावित घरभाडालगायतका सुविधासमेत अपर्याप्त भएको उल्लेख गर्दै एक पूर्वपदाधिकारीले थपिनुपर्ने सूची नै पठाएपछि सदनबाट सोझै पारित गर्ने प्रक्रियामा जानै लागेको विधेयक राज्यव्यवस्था समितिमा पुगेको हो ।
राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिले खाईपाई आएको सेवा, सुविधालाई कानुनीरुप दिन सरकारले सदनमा ल्याएको विधेयकलाई समितिले सामान्य परिमार्जनसहित पारित गरेको हो । जसअनुसार राष्टपतिको मासिक पारिश्रमिक १ लाख ५० हजार ४ सय ५० र उपराष्ट्रपतिका लागि १ लाख ८ हजार ३० ले निरन्तरता पाएको छ । राष्ट्रपतिले प्रत्येक वर्ष एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको चाडपर्व खर्च पनि पाउछन् । पोशाकभत्ता राष्ट्रपतिले वार्षिक २५ हजार रुपैयाँ र उपराष्ट्रपतिले २० हजार रुपैयाँ पाउँछन् । सरकारी आवास सुविधा पाउने दुबै पदाधिकारीको सवारी साधन, आवश्यक पर्नेजति इन्धन, मोविल र मर्मत खर्च राज्यकोषबाटै व्यहोरिन्छ ।
विधेयकले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सचिवालयमा यसअघि नै नियुक्त भई कार्यरत कर्मचारी तथा विज्ञलाई यसै ऐनअनुसार नियुक्त भएको मानिने गरी वैधानिकता दिएको छ । राष्ट्रपतिको स्वकिय सचिवालयमा विशिष्ठ श्रेणी र प्रथम श्रेणी सरहको १/१, द्वितीय श्रेणी सरहको २, तृतिय श्रेणी सरहको ४, नायव सुव्वा सरहको प्रेस संयोजक, कम्प्युटर सहायक तथा फोटोग्रोफर १/१ र कार्यालय सहयोगी र सवारी चालक ४/४ को दरवन्दी स्वीकृत भएको हो । विधेयकले राष्ट्रपतिका ७ र उपराष्ट्रपतिका ५ विज्ञ (सल्लाहकार) लाई पनि वैधानिकता दिएको छ ।
प्रकाशित : भाद्र २७, २०७४ २२:३०
प्रदेश २ : प्रतिष्ठाको लडाइँमा प्रमुख दल
प्रमुख दलका शीर्ष नेता मैदानमा उत्रन थालेपछि चुनावी माहोल तातेको छ
एमाले अध्यक्ष केपी ओली पनि मधेस झर्न चाहेका थिए । तर, एमालेकै मधेस केन्द्रित नेताहरूले नआउन सुझाव दिएपछि रोकिएका छन् । कांग्रेस, माओवादी र मधेस केन्द्रित दलका कार्यकर्ताले ओलीलाई मधेसविरोधी नेताका रूपमा चित्रण गरिरहेका बेला ‘जे पनि हुन सक्ने’ भन्दै उनलाई नआउन सुझाइएको हो । एमाले प्रदेश २ का इन्चार्ज सत्यनारायण मण्डलले पार्टी अध्यक्षलाई मधेस नझर्न सुझाएको स्विकारे । ‘अहिले ठूलो मास आयोजना गर्न सकिँदैन । हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान वडामा मतदाता सुरक्षित गर्नेमै केन्द्रित छ । घरदैलोमा उम्मेदवारहरू लाग्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य स्थिति पनि राम्रो छैन । एउटा जिल्लामा लगेपछि अर्को जिल्लामा किन आएन भन्ने हुन्छ । त्यसैले नआउनै राम्रो हुन्छ भनिएको हो ।’
मधेस केन्द्रित दलहरू मधेस आन्दोलन र त्यसले स्थापित गर्न नसकेका मुद्दासँग जोडिएर मत मागिरहेका छन् । उनीहरूको संगठनभन्दा पनि ‘सेन्टिमेन्ट’ आकर्षण छ । कांग्रेस र एमालेको तल्लो तहसम्मै संगठन छ । संविधान संशोधनको मुद्दाले मधेसमा प्रतिरक्षात्मक भएको एमालेले भडकिलो प्रचारप्रसार र सभामा नलागेर घरदैलोमा बढी फोकस गरेको छ । ‘जे–जे भए पनि अन्तिममा हुने मनी, मसल र कास्ट नै निर्णायक हुने हो,’ जनकपुरका बुद्धिजीवी डा. भोगेन्द्र झा भन्छन्, ‘अन्तिम बेला यी सबै हत्कण्डा प्रयोग गर्नेले बाजी मार्छ ।’